डि आर भट्ट, बैतडी, २२ जेठ । बैतडीमा एक जना व्यापारीले मदिरा पसलको अनुमति पत्र स्थानीय सरकारलाई बुझाएका छन् । लामो समय देखि मदिराको कारोबार गर्दै आएका मेलौली नगरपालिकाका व्यवसायीले वडा कार्यालयमा स्वेच्छाले अनुमति पत्र फिर्ता गरेका हुन् । २०७३ सालबाट मेलौली नगरपालिका वडा नं. १ मा मदिराको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी सरद नेगीले वडालाई मदिरा मुक्त बनाउनु पर्छ भन्दै आफैले लाइसेन्स फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक अपराधहरु अत्यधिक बढ्न थालेपछि आफुले मदिरा पसल बन्द गरेको व्यवसायी नेगीले बताए । परिवर्तन पर्खेर नआउने भन्दै व्यवसायी नेगीले परिवर्तनका लागि आजै आफुबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मदिरा पसल बन्द गरी महिलाको अभियानमा समर्थन जनाएको उनले सुनाए । वडा नं. १ का महिलाहरु मदिरामुक्त वडा बनाउन अभियानमा जुटेका छन् ।
यसरी नै सबै व्यवसायीहरुले नगर भित्र मदिराको कारोबार बन्द गर्न सहयोग गरे निकट भविष्य मै नगरपालिकालाई मदिरामुक्त नगर बनाउन सकिने नगर प्रमुख कृष्ण सिंह नायकको भनाइ छ । सामाजिक अपराधको आविष्कार गर्ने मदिरा पसल बन्द गरी हिंसामुक्त समाज निर्माणमा सहयोग गरेको भन्दै व्यवसायी नेगीलाई मेलौली नगरपालिकाले फुलमाला अविरका साथै खादाद्वारा सम्मान गरेको छ । नगरपालिका भित्र अझै पनि २ दर्जन बढी मदिरा पसल रहेका छन् । मेलौली नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण गर्ने भने पनि अझै त्यो योजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।